Udlala njani umdlalo weGolane weBhola
"Ibhola eline" ligama lefomathi yegalufu apho i-golfers idibana nayo, nganye i-golfe idlala ibhola layo legalufu kulo lonke, kwaye amanqaku amancinane amaqela abalingani ababala njengeqela leqela kwiziko ngalinye.
Ibhola eline idlalwa ngokudlala umdlalo , kunye namaqela amabini ama-2 ajongene nawo. Enyanisweni, yilapho igama elithi "ibhola eline" livela: Kwimibala emine yebhola, kukho iibhola ezine zegalufa ezidlala kwindawo nganye.
Ibhola eline linokusetyenziswa njengefomati yokudlala, kodwa ukuba kunjalo, kunokuthiwa elinye igama (ngokukodwa kwiqela okanye iqela lomdlalo okanye okunjalo), njengebhola elingcono okanye ibhola elingu-2 lomntu ongcono .
Ibhola eline kwiPro Golf
Kukho iindidi ezinkulu zegolomenti kwiigalufa ezigqibeleleyo ezisebenzisa umdlalo webhola ezine njengenye yefomathi zabo zokhuphiswano: i- Ryder Cup , iNdebe yeMongameli kunye neNdebe ye-Solheim . Lezo zibukhulu xa zifika kwiikhenketho zamaqela ngamazwe.
Ibhola eline liyingxenye yeMidlalo yoMongameli ukusuka ekubeni loo ngqungquthela yamatye ngo-1994; sele isetyenzisiwe kwiNdebe yeSolheim ekubeni eso siganeko saqala ngo-1990.
Nangona kunjalo, ibhola enye yayingekho enye yefomathi yoqobo esetyenziswe kwiNdebe yeRyder. Xa umdlalo weRyder uqala ngowe-1927 kunye nayo yonke indlela ngomdlalo we-1961, imidlana emine kunye neyodwa yeemidlalo zadlalwa. Ibhola lesine yongezwa kwintsebenzo yokuqala nge-1963 Ryder Cup.
Ngokubhekiselele kwiqela lezemidlalo eziphambili ze-amateur: I-Walker Cup ayisebenzisi ibhola emine, i- Curtis Cup yenzayo.
Umzekelo Wokubeka kwiMidlalo emine yeBhola
Ngoko ukugcina amanqaku njani kumsebenzi webhola emine? Siza kubiza amaqela ethu amabini Ngecala 1, equkethe iGolfers A kunye neB; kunye neCandelo 2, eliqukethe iGolfers C kunye noD.
Kulo mgobo wokuqala, bonke abagadi begalufa abane, kunye nabo bonke abagadi begalufa emdlalweni badlala iibhola zegalufa baze badibane . Amaqabane aqhathanisa amanqaku: Ngubani na owenza amanqaku angcono emgodini? Ukuba iGolfer A amanqaku amane kunye neGolfer B amanqaku 6 kwi-hole yokuqala, ngoko amanqaku angasemva kwe-1 kulo mgobo ngu-4. Ukuba uhlangothi lwe-2 lufumana i-Golfer C kunye ne-6 ukusuka kwi-Golfer D, amanqaku eqela eli li-3. , kulo mzekelo, uzuza umgodi wokuqala, 3 ukuya ku-4.
Ngomdlalo wokubetha kwebhola umqhubi webhola, abagadi begaluli ababini kwicala elikhawuleza ngaphantsi kweengcambu zabo ezimbini kwiphotho nganye, ngoko-ke nibambe phezulu ekupheleni komjikelo uze uqhathanise inani elipheleleyo kwintsimi.
Ibhola leMine kwiMithetho
Ngenxa yeqela elinesibini ibhola elinebhola, kukho ukungafani embalwa kwimithetho yokuncintisana kwebhola ezine. Khangela oku kulandelayo:
Umthetho 30 ujongana nomdlalo womdlalo webhola
Umthetho 31 ujongana nebhola lebhola lebhola
Inkcazo esemthethweni kwimigaqo yegalufu yebhola yomdlalo webhola ibhola:
"Umdlalo apho abadlali ababini badlala ibhola elingcono ngokubhekise kwibhola engcono yabanye abadlali."
Inkcazo esemthethweni kwiMithetho yeGalofu yomdlalo webhola yebhola yile:
"Ukhuphiswano apho amakhankethi amabini adlala njengabalingani, elowo udlala ibhola yakhe. Amanqaku aphantsi amaqabane awona manqaku." Ukuba elinye iqabane lihluleka ukugqiba umdlalo, akukho sihlwayo. "
Ukukhubazeka kwiBane ibhola
Izibonelelo zabasebenzi abaneemfuno zokhuphiswano lwebhola zibhekiswe kwi-manual ye-handicap ye-USGA, ICandelo 9-4 (www.usga.com).
Njengamaxesha onke, abagadi begalufu abane ababandakanyekayo kumdlalo baqala ngokuqaphela ukukhubazeka kwabo .
Kwimidlalo emidlalweni yebhola emine, i-USGA ithi: "Inkqubo yokukhubazeka kwabadlali abane iyancitshiswa ngenxa yokukhubazeka komdlali onobunzima kakhulu, odlala emva kokuqala. umahluko. " Jonga iCandelo 9-4a (iii) ye-USGA Handicap Manual ukuze uninzi.
Kwimibala emine yokubetha kwebhola, abagadi begalufu belicala bayavunyelwa ipesenti ezingama-90 zezikolo zabo ezikhuselekeni kumadoda, amaphesenti angama-95 eenkalo zabo zokukhubazeka kwabasetyhini. Jonga iCandelo 9-4b (ii) ye-USGA Handicap Manual ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu.
I-USGA kunye ne-R & A zisebenzisa "ibhola emine" - amagama amabini - njengopelo.
Nangona kunjalo, kuyaqhelekile ukuba ibone ipapele njengenye yegama-ezine ibhola. Ukupeliswa kwesipelingi - ibhola emine - kuqhelekile. Zonke ziyamkelekile.
Ikhonkco Phakathi kobuhlanga kunye noXinzelelo
10 Abadumi beSpain abaphawulekayo kuyo yonke imbali
Ukuhlaziywa kweNcwadi: 'Umthendeleko oshukumisayo'